UEFA ရဲ့ ဒိုင်လူကြီးအကြီးအကဲရာထူးက ရုတ်တရက်နှုတ်ထွက်ခဲ့တဲ့ ကော်လီနာ Collina
ဥရောပဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ ဒိုင်လူကြီးအကြီးအကဲရာထူးက နှုတ်ထွက်ခဲ့တဲ့ ကော်လီနာ Collina
2 Aug 2018 . 3:00 AM
ဥရောပဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် (UEFA) လက်အောက်မှာ ဒိုင်လူကြီးအကြီးအကဲအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ နာမည်ကျော် ကွင်းလယ်ဒိုင်ဟောင်း ကော်လီနာ Collina ဟာ ရာထူးကနေ ရုတ်တရက်နှုတ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စတချို့ကြောင့် (၈)နှစ်ကြာ တာဝန်ယူခဲ့တဲ့ ရာထူးကနေ နှုတ်ထွက်ကြောင်း ကော်လီနာ Collina က တရားဝင်ကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ လာမယ့်ဘောလုံးရာသီ ချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲမှာ VAR စနစ် အသုံးပြုဖို့ တိုက်တွန်းခဲ့တဲ့ ကော်လီနာ Collina အကြံပေးမှုကို UEFA ဘက်က ငြင်းဆန်ခဲ့လို့ သူ့အနေနဲ့ ရာထူးကို စွန့်လွှတ်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း ဥရောပအခြေစိုက် သတင်းဌာနတွေက ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ UEFA ဥက္ကဌ ဆီဖာရင် Ceferin က VAR စနစ်ဟာ နည်းပညာအသစ်တစ်ခုဖြစ်တာကြောင့် အချိန်ပေးဖို့ လိုအပ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပြီး ကော်လီနာ Collina ရဲ့ တိုက်တွန်းမှုကို ပယ်ချခဲ့လို့ ရာထူးကနေ နှုတ်ထွက်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။
FIFA ရဲ့ ဒိုင်လူကြီးကော်မတီမှာ အကြီးအကဲတစ်ဦးအဖြစ်လည်း တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ ကော်လီနာ Collina ဟာ VAR စနစ်ကို ထောက်ခံအားပေးသူဖြစ်ပြီး ပြီးခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲမှာ VAR စနစ်ကို ပြိုင်ပွဲသမိုင်းတစ်လျှောက် ပထမဆုံးအကြိမ် အသုံးပြုဖို့ အဓိကကြိုးပမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ကော်လီနာ Collina ရာထူးကနှုတ်ထွက်ခဲ့တဲ့အပေါ် UEFA ဥက္ကဌ ဆီဖာရင် Ceferin က “ကော်လီနာ Collina ဟာ သူ့ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ ရာထူးကို သရုပ်ပြပွဲတစ်ပွဲမှာ ကွင်းလယ်ဒိုင်အဖြစ် တာဝန်ယူနေတဲ့ ပုံစံမျိုးနဲ့သာ နားလည်ထားသူတစ်ဦးပါ”လို့ ဝေဖန်ခဲ့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကော်လီနာ Collina ရဲ့ နေရာကို နာမည်ကျော် ကွင်းလယ်ဒိုင်ဟောင်းတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ရိုဆက်တီ Rosetti နဲ့ အစားထိုးခန့်အပ်လိုက်ကြောင်း UEFA က တရားဝင်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ အသက် (၅၀)အရွယ်ရှိ အီတလီလူမျိုး ရိုဆက်တီ Rosetti ကလည်း VAR စနစ်ကို ထောက်ခံသူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ပြီးခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲမှာ VAR စနစ် ကြီးကြပ်သူတစ်ဦးအဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Photo:GDS.it, Aktuelle Nachrichten
ဥရောပဘောလုံးအဖှဲ့ခြုပျရဲ့ ဒိုငျလူကွီးအကွီးအကဲရာထူးက နှုတျထှကျခဲ့တဲ့ ကျောလီနာ Collina
ဥရောပဘောလုံးအဖှဲ့ခြုပျ (UEFA) လကျအောကျမှာ ဒိုငျလူကွီးအကွီးအကဲအဖွဈ တာဝနျထမျးဆောငျနတေဲ့ နာမညျကြျော ကှငျးလယျဒိုငျဟောငျး ကျောလီနာ Collina ဟာ ရာထူးကနေ ရုတျတရကျနှုတျထှကျခဲ့ပါတယျ။ ပုဂ်ဂိုလျရေးဆိုငျရာကိစ်စတခြို့ကွောငျ့ (၈)နှဈကွာ တာဝနျယူခဲ့တဲ့ ရာထူးကနေ နှုတျထှကျကွောငျး ကျောလီနာ Collina က တရားဝငျကွညောခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ လာမယျ့ဘောလုံးရာသီ ခနျြပီယံလိဂျပွိုငျပှဲမှာ VAR စနဈ အသုံးပွုဖို့ တိုကျတှနျးခဲ့တဲ့ ကျောလီနာ Collina အကွံပေးမှုကို UEFA ဘကျက ငွငျးဆနျခဲ့လို့ သူ့အနနေဲ့ ရာထူးကို စှနျ့လှတျခဲ့တာဖွဈကွောငျး ဥရောပအခွစေိုကျ သတငျးဌာနတှကေ ဖျောပွခဲ့ပါတယျ။ UEFA ဥက်ကဌ ဆီဖာရငျ Ceferin က VAR စနဈဟာ နညျးပညာအသဈတဈခုဖွဈတာကွောငျ့ အခြိနျပေးဖို့ လိုအပျကွောငျး ပွောကွားခဲ့ပွီး ကျောလီနာ Collina ရဲ့ တိုကျတှနျးမှုကို ပယျခခြဲ့လို့ ရာထူးကနေ နှုတျထှကျခဲ့တာဖွဈကွောငျး သိရပါတယျ။
FIFA ရဲ့ ဒိုငျလူကွီးကျောမတီမှာ အကွီးအကဲတဈဦးအဖွဈလညျး တာဝနျထမျးဆောငျနတေဲ့ ကျောလီနာ Collina ဟာ VAR စနဈကို ထောကျခံအားပေးသူဖွဈပွီး ပွီးခဲ့တဲ့ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲမှာ VAR စနဈကို ပွိုငျပှဲသမိုငျးတဈလြှောကျ ပထမဆုံးအကွိမျ အသုံးပွုဖို့ အဓိကကွိုးပမျးခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ ကျောလီနာ Collina ရာထူးကနှုတျထှကျခဲ့တဲ့အပျေါ UEFA ဥက်ကဌ ဆီဖာရငျ Ceferin က “ကျောလီနာ Collina ဟာ သူ့ထမျးဆောငျခဲ့တဲ့ ရာထူးကို သရုပျပွပှဲတဈပှဲမှာ ကှငျးလယျဒိုငျအဖွဈ တာဝနျယူနတေဲ့ ပုံစံမြိုးနဲ့သာ နားလညျထားသူတဈဦးပါ”လို့ ဝဖေနျခဲ့ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။ကျောလီနာ Collina ရဲ့ နရောကို နာမညျကြျော ကှငျးလယျဒိုငျဟောငျးတဈဦးဖွဈတဲ့ ရိုဆကျတီ Rosetti နဲ့ အစားထိုးခနျ့အပျလိုကျကွောငျး UEFA က တရားဝငျကွညောခဲ့ပါတယျ။ အသကျ (၅၀)အရှယျရှိ အီတလီလူမြိုး ရိုဆကျတီ Rosetti ကလညျး VAR စနဈကို ထောကျခံသူတဈဦးဖွဈပွီး ပွီးခဲ့တဲ့ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲမှာ VAR စနဈ ကွီးကွပျသူတဈဦးအဖွဈ တာဝနျယူခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
by Ko Kyue . 14 mins ago